“Waxaan diyaar u ahay inaan u ciyaaro Arsenal” – Özil oo fariin u diray Unai Emery – Gool FM
(London) 17 Okt 2019. Xiddiga reer Germany iyo kooxda Arsenal ee Mesut Özil ayaa xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu ka qeyb qaato kulamada soo socda ay ciyaareyso naadigiisa Gunners.
Dhinaca kale Mesut Özil ayaa xusay inuu aad u niyad jabsanaa xilliyadii lasoo dhaafay sababa la xiriira inuusan wax caawinaad ah u sameynin kooxdiisa reer Lodnon ee Arsenal xilli ciyaareedkaan.
Mesut Özil ayaa ciyaaray xilli ciyaareedkan kaliya 2 kulan, Unai Emery ayaana ka tagay adeegiisa dhamaan kulamadii lasoo dhaafay, iyadoo saxaafada Ingariiska ay cadeysay in macalinka reer Spain uu doonayo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uu kaga takhaluso xiddigan reer Germany.
Laakiin iyadoo ay taasi jirto haddana Mesut Özil ayaa wuxuu rajeenayaa inuu soo laabto si uu kaga qeyb qaato kulamada ay ciyaareyso kooxda Arsenal, isagoo xaqiijiyay inuu diyaar u yahay inuu caawiyo kooxdiisa Gunners.
Mesut Özil ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Xaqiiqdii aniga ahaan aad ayaan u niyadjabsanaa, laakiin waxaan ahay ciyaaryahan xirfadle ah, waana inaan ixtiraamo go’aanka tababaraha”.
“Inaan la iiga yeerin liiska xiddigaha kooxda, iyo inaan kulamada ka daawado gurigeyga waxay iga dhigeysaa midaan caawin Karin kooxda, waxaan rabaa inaan qeyb ka noqdo kooxdan, isla markaana aan asxaabteyda ka caawiyo inay guul gaaraan, waxaana diyaar u ahay inaan u ciyaaro Arsenal”.
“Kooxda ayaa ah waxa ugu muhiimsan, marka waa inaan wax walba siiyaa oo aan diyaar u noqdo inaan ka qeyb qaato waqti kasta”.
Intaas kaddib Mesut Özil ayaa la weydiiyay su’aal ah inuusan markale u ciyaari doonin kooxda Arsenal ayaa wuxuu ku jawaabay:
“Uma maleynayo inay taasi dhici doonto, waan ciyaari doonaa, waana sameyn doonaa waxa uu tababaruhu iga codsado si aan kaga caawiyo kooxdeyda inay gaarto ujeedooyinkeeda”.
“Waxaan ka soo hoos shaqeeyay tababarayaal badan sida Mourinho, Wenger iyo Joachim Loew, mar walbana waxaan ixtiraam u muujinayay iyaga, si la mid ah ayaan u muujin doonaa Unai Emery”.
Waxaa xusid mudan in heshiiska Mesut Özil ee kooxda Arsenal uu dhici doona xagaaga 2021.